Wakhtiga iyo Masaafadu ma kala Gooyaan Saaxiibbada Dhabta ah sida Shiinaha iyo Soomaaliya | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Wakhtiga iyo Masaafadu ma kala Gooyaan Saaxiibbada Dhabta ah sida Shiinaha iyo Soomaaliya
Muqdisho, (SONNA)Oct 28, 2021; Konton sanno ka hor maanta oo kale, dalka Shiinuhu waxa uu dib u soo ceshaday booskiisii xaqa ahaa ee Qaramada Midoobay.Soomaalidu waxa ay ugu farxeen sida shacabka Shiinaha oo kale, waayo Soomaaliya waxay ka mid ahayd 23-ka dal Shirweynaha Guud ee Qaramada Midoobay u gudbiyay Qaraar lagu taageerayo Shiinaha, waxayna hore Golaha ugu gudbisay labo codsi oo ay ku garab-siinayso dalka Shiinaha. Sidoo kale, Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalkii ugu horreeyay Afrikaan ah iyo Muslimka ah ee taageerada u muujiyay Shiinaha xilligaas. Guddoomiye Mao Zedong ayaa yiri, “Walaalaha reer Afrikaan ah ayaa Shiinaha dib ugu celiyay Qaramada Midoobay.” Sidaasi darteed, Soomaaliya waa walaal iyo saaxiib wanaagsan oo uu dalka Shiinuhu leeyahay.
Kow iyo lixdan sanno ka hor, Soomaaliya isla markii ay heshay madax-bannaanida waxa ay xiriir diblomaasiyadeed la yagleeshay Shiinaha, taasi oo Soomaaliya ka dhigaysa dalkii ugu horreeyay Bariga Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la yeesha Shiinaha.
Muddo 600 oo sanno ka hor ah, bad-mareenkii Shiinaha ee Zheng ayaa yimid Muqdisho, caasimadda Soomaaliya ee hadda. Boqolaal sanno ka hor, qoraallada taariikheed waxa ay muujinayaan in labada dhinac ay ganacsi isweydaarsan jireen, gaar ahaan wakhtigii boqortooyada Tang (618 ilaa 907 A.D.). Dunidu way isbedeshaa waqti ka dib.Sidaas oo ay tahay, xiriirka soo jireenka ah ee Shiinaha iyo Soomaaliya waxa uu noqday mid aanay saamayn wakhtiga iyo masaafada. Soomaaliya waxa ay ku taallaa Geeska Afrika iyada oo kumannaan mayl ah ka durugsan Shiinaha oo ku yaalla Bariga Aasiya. Shiinaha iyo Soomaaliyaba waxa ay leeyihiin taariikh fog, waxayna wadagaan duruufo adag oo labadoodaba soo waajahay wakhtiyadii dambe.Dadka Shiinaha, sida Soomaalida oo kale, waa dad hawlkar ah, geesiyaal ah, adkaysi badan isla markaana qalbi wanaagsan, labada dalna waxa ay ka siman yihiin dareenka xooggan ee dal jacaylka ku suntan. Arrimahan ay isaga midka yihiin labada dal ee kala fog waxa ay muujinayaan sidii inay deris is yaqaanna. Sida gabay uu tiriyay abwaan reer Shiine ah ku xusan, “Masaafada dheer ee u dhexaysa saaxiibbada dhabta ahi ma kala goyso”.
Shiinaha iyo Soomaaliyada waxa ay si adag u ilaaliyaan nidaamka caalamiga ah ee Qaramada Midoobay saldhigga u yahay iyo sidoo kale kala-dambaynta caalamiga ah ee ku salaysan sharciga caalamiga ah. Labada dalka waxa ay qiimeeyaan madaxbannaanida qaran iyo midda dhuleed, waxa ayna iska diidaan faragelinta dibadeed ee arrimahooda gudaha. Labada dhinac waxa ay sidoo kale ilaaliyaan sinnaanta, waxa ay u doodaan caddaaladda, iyaga oo isku garab siiya danaha udub-dhexaadka ah ee u dhexeeya iyo arrimaha waaweyn ee tabanaya labada dal. Soomaaliya waxa ay si adag u taageertaa Siyaasadda Midnimada Shiinaha, Shiinuhuna waxa uu si taas lamid ah u ilaaliyaa xuquuqda sharciga ah iyo danaha Soomaaliya iyo dalalka kale ee soo koraya.
Dib ugu laabashada Shiinaha ee Qaramada Midoobay waxa ay la macno tahay in dalalka soo koroya ay markii ugu horraysay cod iyo awoodba ku yeesheen xubnaha joogtada ah ee Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Sannadkan, Madaxweyne Farmaajo qoraalkii hambalyada ahaa ee uu u diray Madaxweyne Xi Jinping waxa uu Shiinaha ugu hambalyeeyay sannad-guurada aasaaska Xisbiga Shuuciga ee Shiinaha iyo Maalinta Qaran ee Shiinaha. Waxa uu bogaadiyay horumarka ballaaran ee Shiinuhu ku tallaabsaday iyo doorka ay ka qaateen ilbaxnimada siyaasadeed ee aadanaha. Waxa uu sheegay in Soomaaliya weligeed ay ahaanayso saaxiib uu Shiinuhu leeyahay. Madaxweyne Xi Jinping ayaa uga mahadceliyay Madaxweynaha Soomaaliya hambalyada diirran ee uu soo diray.
Bishi Sebtembar, Madaxweyne Xi Jinping waxa uu khudbad muhiim ah ka jeediyay meertada 76aad ee Shirweynaha Guud ee Qaramada Midoobay oo uu qaab muuqaal ahaan ah uga qayb-galay. Waxa uu soo jeediyay “Hindise Caalami ah oo Horumarineed”, isaga oo hoosta ka xarriiqay in dhammaanteen aan u baahannahay in mudnaanta koowaad aan siinno horumarka iyada oo aan dal iyo dad toonna meel cidlo ah lagaga tegayn, lana raacayo nidaam horumarineed oo ay dadku laf-dhabar u yihiin.
Shiinuhu ballanqaadyadiisa waxa uu ku laraa waxqabad dhab ah. Aasaaska xiriirka diblomaasiyadeed ka bacdi, Shiinuhu waxa uu Soomaaliya ka caawiyay dhisidda Tiyaatarka Qaranka, Istaadiyamka Qaranka, Cisbitaalka Banaadir iyo mashaariic kale oo badan kuwaasi oo ilaa maanta la dheefsado. Shiinuhu waxa uu sidoo kale in ka badan 12 koox oo dhakhaatiir ah u soo diray Soomaaliya si ay daryeel caafimaad ugu fidiyaan shacabka Soomaaliyeed.
Nasiib darro, Soomaaliya waxa ka qarxay dagaal sokeeye sannadkii 1991, Shiinuhuna waxa uu sii waday dadaallada lagu taageerayo Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada gargaarka bini’aadannimo, waxbarashada, caafimaadka iyo dhinacyada kale.
Xilligan la joogo, masiibooyinka dabiiciga ah iyo dagaallada sokeeye awgood, in ka badan saddex meelood, hal meel oo dadka Soomaaliyeed kamid ah ayaa u baahan gargaar degdeg ah;shan meelood meelna waa barakaceen.. Gargaar bini’aadannimo oo cusub ayaa dowladda Shiinuhu dhawaan ku wareejisay Soomaaliya iyada oo la gaarsiin doono qaybaha bulshada ee nugul. Sahaydan ayaa timid waqtigii saxda ahaa ee lagu caawin lahaa dadka ku dhibaataysan dalkan.
Labada dal ayaa sidoo kale ka wada shaqeynaya la dagaalanka musiibada COVID-19.Sannadkii la soo dhaafay markii cudurku aadka u faafay, ardayda Soomaaliyeed ee Shiinaha ku nool waxa ay ku biireen isxilqaamayaashii caafimaad ee magaalada Wuhan ee Shiinaha iyaga oo muwaaddiniinta ku garab siiyay la dagaalanka cudurka. Sidoo kale, bishii Abriil ee sannadkan, dowladda Shiinuhu wax ay ugu deeqday Soomaaliya labo boqol oo kun oo tallaalka cudurka COVID-19 ah.
Waqti aan fogayn ka hor, cirbixiyeen reer Shiine ah oo lagu magcaabo Tang Hongbo ayaa sawir ka soo qaaday hawada sare kaasi oo muujinaya khariiradda Soomaaliya. Waa sawir micne u samaynaya dad badan. Sannadihii la soo dhaafay, waloow ay jireen caqabado xooggan, haddana dadka Soomaaliyeed waxa sameeyeen dadaallo joogto ah iyaga oo taageero xooggan ka helaya caalamka, Soomaaliyana waxa ay xaqiijisay horumar fiican oo ku aaddan dib u dhiska iyo soo celinta nabadda.
Soomaaliya waxa ay caan ku tahay inay leedahay tirada ugu badan ee geela adduunka iyo mooska ugu macaan caalamka, waxayna leedahay xeebta ugu dheer qaaradda Afrika, iyada oo qani ku ah kalluun iyo khayraad macdaneed oo badan. Sidaasi awgeed, iskaashiga Shiinaha iyo Soomaaliya waxa uu leeyahay fursad weyn iyo mustaqbal ifaya.
Tiyaatarka Qaranka ee Muqdisho oo dhisiddiisa ay Soomaaliya ku taageertay dowladda Shiinaha waxa dhawaan lagu soo bandhigay filimkii ugu horreeyay 30 sanno ka bacdi. Dadka qaar ayaa bandhigga ku sifeeyay habeen taariikhi ah oo muujinaya rajada u soo laabatay Soomaaliya sannado caqabado badan watay ka dib.
Dadka Shiinaha iyo shacabka Soomaaliyeed haddii ay gacmaha isqabsadaan si ay u dhisaan mustaqbal wanaagsan oo ay wadaagaan aadanaha oo dhan, waxa hubaal ah in markabka saaxiibtinnimada labada dal uu ka gudbi doono mawjado badan, labada waddanna uu u beryi doono waa cusub oo ay labada shacabba si wadajir ah uga dheefi doonaan.
W/Q: Mudane Fei Shengchao
Safiirka Jamhuuriyadda Shacabka ee Shiinaha u fadhiya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Previous articleAMISOM oo tababar usoo xirtay xubno ka tirsan Boliiska Koofur Galbeed
Next articleAMISOM oo beenisay inay ku lug lahayd dagaalkii ka dhacay Guri-ceel